Monday May 09, 2022 - 18:44:04 in by Super Admin
JSL Md Muuse Biixi Cabdi Ka Hor Jeeddiyey Labadda Aqal Baarlamaan Ee JSL.
Khudbadda Madaxweynaha Oo Dhamaystiraninna, Waxay U Dhignayd Siddan "Isniin, 09 May 2022
 Dhismaha Waddada Burco-Ceerigaabo waxay wax weyn ka beddelaysaa Dhaqan-dhaqaalaha (Socioeconomic aspect), isku socodka bulshada iyo ganacsiga ee dadkeena, tusaale ahaan: Magaaladda Burco ilaa Ceerigaabo waxa lagu gaadhi jiray 9 ilaa 10 Saacadood oo socod xidhiidh ah, haddase waxa lagu gaadhaa 5 saacadood. Noolka gaadiidku qofkiiba waxa uu ahaa ku dhawaad 60 - 80 Doollar, haddase waa 20 doollar oo keliya.
Waxaan leeyahay dhammaan Ciidanka Qalabka-sida, Xaasaskooda iyo Caruurtooda, "Waxaanu idiin haynaa sharaf, xurmo iyo abaal aan duugoobayn. Duruuf kasta oo aad maanta ku nooshihiin, waxaad ku tallaallan tihiin Quluubta Shacabka Somaliland”.
Haddaba, ilaa hadda maxaa innoo qabsoomay?.
$5,001 - 40,000 Waxa la siiyey 25% hantidii ka baxday.
Maxaynu ka baranay Dhibaatadii Suuqa Waaheen?.
1. In doorashooyinku ku qabsoomaan xilligii loo asteeyey.
2. In Xisbiyada Qaranka oo ah hilinka ay Muwaadiniintu u maraan xaqiijinta hankooda siyaasadeed ay noqdaan kuwo ku dhisan sharci, oo aan marna muddo dhaaf noqon, dhexdoodana ay ka muuqato dimuqraadiyad dhab ah oo ku dhisan mabaa’di iyo siyaasad cad oo qeexaysa qorshaha ay dalka ku horumarin karaan.
3. In dhaqaalaha Xisbigu uu ka yimaado taageerayaasha Xisbiga ee gobol kasta, kana fogaadaan faro-gelin shisheeye. Haddii faro-gelin shisheeye soo dhex-gasho Xisbiga, waxay khatar ku tahay Qarannimada dalkeena.
1. In si dhab ah loo fahansiiyo Maraykanka taariikhda xanuunka badan ee Somaliland kala kulantay midnimadii dhicisawday ee baadi-goobka shanta Soomaali weyn iyo xogta sidii bahalnimada ahayd ee Digtaytarkii Siyaad Barre ugu dalbaday Diyaarado, Taangiyo, madaafiic iyo hub culus oo dhan magaalooyinka Somaliland.
2. In si faah-faahsan loogu sharraxo xasuuqii loo gaystay ummadan iyo sababihii keenay halgankii hubaysnaa ee Somaliland iyo in markii Shacabka Somaliland guulaysteen go’aan wadareed ku gaadheen in ay dib ula soo noqdaan madax-bannaanidoodii.
3. In loo sharraxo in Somaliland tahay Dawlad dimuqraadi ah oo Caalamku indhaha ka laliyey muddo 30 sanno ah, balse Somaliland ay dhaqaalaheeda yar u hurtay amniga dalkeeda, ilaalinta xasilloonida Gobolka Geeska Afrika iyo adduunkaba.
4. In laga wada tashado sidii Iskaashi buuxa u dhex-mari lahaa labada dal. Waa Iskaashi bilow ah oo aannu rajaynayno in uu dhakhso u midha-dhalo.
 In la diyaariyey, isla markaana la gudbiyey Mooshinka Xeerka Ishaashiga Somaliland iyo Maraykanka "Somaliland Partnership Act”, kaas oo ka dalbanaya in Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka oo kaashanaysa Wasaaradda Gaashaan-dhigga in ay soo dar-saan qaabka ugu habboon ee Somaliland iyo Maraykanku Iskaashi u yeelan karaan mustaqbalka.
Qofku wuu kufi karaa, laakiin in uu kici waayo ayaa doqonniimo ah. Soomaalidu waxay tidhaahdaa, "Gobtu way liicdaa ee ma jabto”.
Hiraalka Horumarinta Somaliland ee 2030 (Somaliland Vision 2030), waxa uu qeexayaa in dalkeenu noqoto dal "Dimuqraadi ah oo sharci lagu dhaqmo, nabad-gelyo iyo barwaaqo ah, dadkiisuna ku nool yihiin hodan-tinimo loo dhan yahay iyo in ay noqoto iftiinka aqoonta iyo ilbaxnimada ee ka dhex-muuqda Afrika”.
Waa hiraal iyo higsi qurux badan oo wanaagsan af ahaan, balse u baahan ficil iyo fahan qoto-dheer. Waa hiraal innooga baahan isku-duubni, midnimo iyo walaalnimo qoto-dheer, taasina waan ku ammaanayaa shacabkeena gobta ah, waayo waxa markhaati u ah sida sharafta leh ee walaalnimada iyo wada-jirka leh ee ay iskugu gurmadaan, ee ul iyo diirkeed u noqdaan marka dhibaato soo food saarto. Waxaan leeyahay, "Waa intaas oo loogala sii dhawaado”.
 Bad-qabka Bulshadda.
1. Qorshaha Xukuumadda ee la xidhiidha Siyaasadda Bad-baadada Bulshada (Civic Protection Policy) ee lagaga hortagayo masiibooyinka dabiici ah iyo kuwa dad-sameega ah sida: (Dagaallo, dhul-gariir, dab, weerar cadow, IWM).
2. Xukuumaddu waxa ay siyaasad cad ka leedahay in dhammaan hay’adaha Dawladdu Heer Qaran, Heer Gobol iyo Heer Degmo, ay si dhab ah u hir-geliyaan hab-raacyada iyo hagayaasha ilaalinta caafimaadka iyo bad-qabka bulshada (Health and Safety Standards). Sidoo kale, Xukuumaddu waxa ay dhammaan Gobollada iyo Degmooyinka dalka ka hir-gelinaysaa Waaxda Maaraynta Masiibooyinka.
3. Xukuumaddu waxa ay hir-gelinaysaa in Difaaca Madaniga ah loo daadejiyo ilaa heer Degmo iyo Tuulo. Difaaca Madaniga ahi waa tababar dadka lagu siinayo bad-baadada deegaankooda iyo dadkooda iyo siday uga feejignaan lahaayeen cadow badheedh ama dhuumasho uga dhex abuuri kara fidno.
Eebbaa Mahad Leh.